Vanhurume nenyaya dzezvepabonde
Vanhurume nenyaya dzezvepabonde	Thursday, 14 June 2012 08:03	View Comments
naElsie MojapeloZVINHU zvakagara zvichitaurwa kuti vanhurume vanoda zvepabonde kudarika vanhukadzi. Iko zvino kutori netsvakurudzo yakaitwa ikaburitswa nebepanhau reOxford University inotsinhira pfungwa iyi.Tsvakurudzo iyi yakabuditsa kuti:l Varume vanofunga bonde kupfuura madzimai nekuda kwemushonga unonzi “testosterone” uyo unopa simba nemanyuku-nyuku ekuda kuenda pabonde. Madzimai vakasiyana nekuti ivo vane mushonga unonzi “oestrogen” uyo unoita kuti vave nemoyo munyoro nerudo.
l Mushonga we “testosterone” uyu unogadzirwa nguva dzose zvinosakisa kuti varume vafunge nyaya dzebonde panguva dzose kusiyana nemadzimai vanogadzira “oestrogen” panguva yakatarwa yemwedzi.l Varume vanofunga zvebonde nemadzimai akasiyana uye vanotogona kuparadza mari kuti vawane bonde kusiyana nemadzimai.l Varume vanoparura nyaya dzebonde kusiyana nemadzimai uye vachiriramba kashoma. l Madzimai vanoparura nyaya dzebonde uye vachiriramba kakawanda.Asi zvakadaro, varume vane matambudziko akawanda avanosangana nawo anoderedza manyuku-nyuku avo ebonde.
Izvi zvichinge zvaitika vashoma vanogona kuzotsvaga rubatsiro. Vakawanda vacho vanoona kunge kutaura kuti vane dambudziko kunoderedza kuva varume kwavo. Mamwe ematambudziko anogona kuderedza manyuku-nyuku aana baba epabonde anosanganisira:l Kuderera kwemishonga yema “hormone” mumuviri l Kupera shungu nemudzimai waainayel Matambudziko emaril Kushanda basa rinonetesal Kushoropodzwa nekushungurudzwa nemukadziAsi izvi zvinogona kugadzirika nekuita mitambo yekusimbisa muviri, zvimwe zvikafu zvinokurudzirwa naana chiremba nemishonga chaiyo yechivanhu.-Kwayedza